Hajanona izay karazana hetsika famoriam-bahoaka rehetra ary arahana ireo fepetra nomen’ny fanjakana foibe. Ahemotra aoriana ny fanomezana ny sakramentan’ny fankaherezana any amin’ireo distrika ao anatin’ny diosezy efa voatondro hanatanterahana izany ireto ( Faratsiho, Ambatofotsy, Miandrarivo, Soamananazy). Nivoitra ireo tao anatin’ny fanambarana nataon’i Mgr Philippe Ranaivomanana Evekan'Antsirabe, ny 8 jolay teo. Noraisina ny fepetra, hoy ny fanazavana, « ho fiaraha-mientana amin’ny fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina COVID-19 eto amin’ny faritra Vakinankaratra ». Mihàtra avy hatrany ireo fepetra voarakitry ny fanambarana, ary hiova araka ny fiovan’ny toe-draharaha, hoy hatrany i Mgr Philippe Ranaivomanana.